Sameynta shaxda iyo fogaanta galka ee AutoCAD - Geofumadas
AutoCAD Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk
Maarso, 2008 AutoCAD-AutoDesk, topografia
In this post Waxaan tusi sida aad u dhisi kartaa tilmaamaha box iyo masaafo of geesoolayaasha isticmaalaya AutoCAD Sofdesk 8, hadda Civil 3D. Sidee baan waxan u eegto kooxda in soo dhaafay ee ardayda aan lahaa in koorsada loo yaqaan Topocad, marna aan dhammayn kari waayay, maxaa yeelay, waxaan u baxay safar ... safarka in marnaba loo ogol yahay ii baro style hore.
Waxaan isticmaali doonnaa garbaha isku mid ah ee layliyada hore, boosto aan aragno sida dhis dhisbaan laga bilaabo Excel, mid kale ayaan aragney sida abuuraan wareegyada heerka. Haatan waxan aragnaa sida loo abuuro koorsada iyo masaafada.
Baqshadeynta horey ayaa loo abuuray, sidaa darteed waxa aan daneyneyno waa sida loo dhiso sawir leh xarumaha idaacadaha, masaafooyinka iyo tilmaamaha.
1 Furo COGO
Taasna waxaan sameynaa "barnaamijyada AEC / sotdesk" oo dooro "cogo"
Haddii ay dhacdo markii ugu horeysa ee barnaamijka uu codsanayo inuu abuuro mashruuc. Waa lagama maarmaan in faylka la keydiyo si loo abuuro mashruuc.
2 Samee qaabka warqadda
Si loo qaabeeyo qaabka calaamadeynta, waxaynu sameynaa tallaabooyinka soo socda:
calaamadaha / doorbidka
Qeybta qaabka ah ee laymanka ah waxaan qeexaynaa qaabkan:
Iyada oo ay taasi waxa aan u qeexo qaabka Ereyada on the lines ee geesoolayaasha ah, haddii ay dhacdo waxaa loo isticmaali doonaa hashtags, ka 1. Fursadaha kale waa in fogaanta iyo cinwaanka la geeyaa khadadka, laakiin waxay keeneysaa in ay miiska saaran tahay si haboon. Qalabeyntaas waa la keydsan karaa oo la dhigi karaa marka loo baahdo, faylasha .ltd.
3 Calaamadee xariiqyada xajmiga
Hadda waxaan u baahan nahay in aan qeexno kuwaas oo ah xarumaha saldhigga ah ee aan ka rajeyneyno xogta si loo ogaado dhismaha shaxda koorsada. Sababta aan u sameyno:
"calaamadaha / calaamad"
markaa waxaanu taabanaynaa walxo kasta oo isweydaarsi ah, adigoo gujinaya bidixda ugu dambeysa halka uu xariiqu bilaabmo ka dibna badhanka saxda ah. signal ah in wax la aqoonsan yahay waa in text sida "L1", "L2" ... khuseysaa qoraalkan waxaa laga codsadaa heer oo abuuri Softdesk yeedhay sumadaha.
4 Abuur miiska waddada
Si aad u abuurto miiska, dooro "calaamadaha / jaantuska jadwalka". Si aad u bedesho magaca miiska meel bannaan oo loo yaqaan "Table Table" ayaa loo badalayaa "Data Table", iyo sidoo kale cabbirka qoraalka
Si aad wax uga beddesho cinwaanka tiirarka waxaa lagu doortaa guji bidix ka dibna badhanka "edit" ayaa la adeegsadaa. Shaxda soo socota ayaa horeyba loo hagaajiyey.
Si aad u geliso sanduuqa, guji badhanka "pick", ka dibna guji shaashadda meesha aan dooneyno inaan gelino sanduuqa. Oo voila, waxaan leenahay tilmaamaha sanduuqa iyo masaafada, taas oo firfircoon vectorially, ama haddii aad beddesho line a, xogta ee horyaalka ayaa sidoo kale beddeli doonaa. Haddii xogta wax laga beddelo miiska, vector lama beddeli doono.
Xaaladda 3D, nidaamkani waa la fududeeyay tan iyo markii uusan u baahnayn in la qabto iyada oo loo marayo database-ka, xitaa haddii ay dhacdo in laga furfuro, nidaamku wuxuu ka digayaa khaladaadka xidhitaanka iyo haddii uu rabo inuu xiro si qasab ah.
Boosto kale ayaanu tusnaa sida loo sameeyo wax la mid ah oo leh Microstation iyo macro lagu horumariyo Visual Basic.
Post Previous«Previous Xaqiiqooyinka Google Earth
Post Next Halkee laga helaa Unugyada MicrostationNext »